Indawo Yokudla Yesitsha | Abenzi baseChina Isitsha Sokudla, Abahlinzeki
Isitsha sokudla kwengilazi esiwunxande 330ml LJ-0650
Isiqukathi sokudla seglasi elingunxande olude, senziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme zokudla, kuphephile futhi kunempilo, futhi kulula ukusihlanza. Kungashiswa kuhhavini le-microwave, futhi kungasetshenziswa kuhhavini; Inokuqina okuhle, ukufaka indandatho enezinhlangothi ezine okuvalwe kahle.
Isitsha sokudla seglasi elingunxande 550ml LJ-0651
Isitsha sokudla seglasi lesikwele 360ml LJ-0655
ILONGSTAR ingilazi yesitsha sokudla okuyisikwele, yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme zokudla, kuphephile futhi kunempilo, futhi kulula ukusihlanza. Kungashiswa kuhhavini le-microwave, futhi kungasetshenziswa kuhhavini; Inokuqina okuhle, ukufaka indandatho enezinhlangothi ezine okuvalwe kahle.